Madaxweyne Gaas oo kulan kula qaatay wadanka Ethiopia Safiirka Britain (DAAWO SAWIRRADDA)
Madaxweynaha waxa kulanka ku wehelinayay Taliyaha guud ee ciidanka difaaca Puntland Sareeye Guuto Siciid Dheere, Wakiilka Ethiopia u fadhiya Puntland Mahad Faarax iyo saraakiisha madaxtooyada.
Madaxweynuhu Britain waxa uu u gudbiyay warbixinta Puntland iyo xaaladaha ka jira, barnaamijka xisbiyadda badan iyo weliba qorshahe hawleedka shanta sanno.
Britain iyo Puntland ayaa kulanka uga wada hadlay xoojinta xiriirka dimblumaasiyadeed ee u dhaxeeya, iskaashiga amaanka ,horumarinta nabadgelyadda iyo dardargelinta mashaariicda horumarineed.
Xog Culus Cabdi Halas Qawdhan Oo Nairobi Yimi Faroole Ka Codsaday In Safaarada Australia Uu Geeyo Wiilkiisa Ahaana Ugu Dacwoodo
Waxaa magaalada nairobi ee xarunta wadanka kenya soo gaadhay mid ka mid ah horgaladii xasuuqii ugu xumaa ka gaystay magaalada taleex waa cabdi halas qawdhan kaasoo mudo sadax casho ah joogay nairoboi ayaa u jeedkiisa ahaa in uu cabdiraxmaan faroole uu ka codsaday in uu geeyo safaarada Australia ee ku taalo wadanka kenya si uu ugu kexeeyo wiilkiisa ahaan.
Kadib markii uu cabasho badan uu gudbistay taasoo ah in uu soo gaystay xasuuq in dhulbahante uu ka jeclaa faroole iyo beesha ciise mohamud kadibna ay siyaasadii puntland is badashay oo meeshii ay xukumad kale ay timi.
Waxaaan uu ka codsaday faroole in uu geeyo safaarada Australia ee kenya si uu dacwad wiilkiisa ahaan loogu xareeyo horgalkan oo ceebta aan u arag wax xun ayaa maanta dhalashadiisa ku saxeexay in uu ka mid yahay wiilasha faroole wixii warar ah ee ku soo kordhaa kala soco khaatumonews.com.
Golaha Amaanka QM Oo Cambaareeyay Weerarkii Shalay ka Dhacay Muqdisho.
Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si xoogan u cambaareeyay weerarkii dhimashada sababay ee ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasi oo Alshabaab ay sheegteen.
War kasoo baxay golaha amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in weerarkii Alshabaab ay shalay ku qaadeen dhisme ku yaala agagaarka KM0 ay cambaareynayaan.
“Xubnaha golaha amaanka waxay tacsi u dirayaan dhamaan qoysaskii dadkooda ay ku geeriyooday weerarka, iyagoo caafimaad u rajeynaya dadkii ku dhaawacmay” ayaa lagu qoraalka golaha amaanka, Sidoo kale xubnaha ayaa tacsi u diray shacabka iyo dowlada Soomaaliyeed.
Golaha ayaa sheegay dhankooda inay sii kordhin doonaan taageerada ay siinayaan shacabka Soomaaliyeed iyo dowlada Federaalka Soomaaliya, iyagoo sheegay inay garab taagan yihiin marwalbaa.
Ugu dambeyntii warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in golaha amaanka ay sii wadayaan qorshaha caalamka ay ku doonayaan in Alshabaab looga adkaado dagaalada ka soconaya Soomaaliya, sida qoraalka lagu sheegay.
Dawlada Turkiga oo qaraxii shalay ku tilmaamtay mid lagu carqaladeynayo hormarka Somaliya.
Warsaxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibbadda dalka Turkiga ayaa waxaa lagu sheegay in qaraxii shalay uu ka mid yahay dhacddooyinka foosha xun ee Soomaaliya ka dhacaya.
Wasaaraddu waxay sheegtay in xukuumadda Turkiga ay aad uga xuntahay falalka amaanka lidiga ku ah ee ka dhacaya Soomaaliya isla markaana ay xanuunka la wadaagayso bulshadda Soomaaliyeed.
Qaraxii shalay ka dhacay agagaarkaa baarkii Fiat oo u dhaw dhismaha xarunta ugu weyn hay’adda nabad sugida Al-Shabab waxay sheegeen inay ku laayeen saraakiil sar sare oo ka tirsanaa nabad sugida Soomaaliya hase ahaatee dadka ugu badan ee dhibku soo gaaray waxay ahaayeen rayid ku shaahayay maqaayadda qaraxu ka dhacay.
Marka sidaan oo kale ay wax uga dhacaan wadamada taageera dawlada Soomaaliya iyo ururada caalamiga ahba sidaan oo kale ayay u soo saaraan warar ujeedkoodu yahay cambaareyn.
GOODAX: "Waxaa la qaadayaa Tallaabooyin Amniga lagu sugayo"..
Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka, C/llaahi Goodax Barre ayaa sheegay in xukuumaddu ay qaadayso tallaabooyin lagu adkeynayo ammaanka kuwaa oo uu sheegay inay yihiin kuwo cusub.
Goodax ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay shacabka Muqdisho arki doonaan horumarro laga gaaray ammaanka, isagoo xusay in baaritaanno lagu sameyn doono goobaha sida aadka ah looga shakisan yahay, sida guryaha ay Al-shabaab ku farsameeyaan waxyaabaha qarxa.
“Xukuumaddu tallaabooyin ammaanka lagu adkeynayo ayay qaadaysaa, waxaana ka mid noqon doona in lala wareego gurigii lagu helo inay Al-shabaab ku farsameeyaan hubka iyo waxyaabaha qarxa,” ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha.
Sidoo kale, wasiirku wuxuu sheegay in ammaanka Muqdisho uu yahay mid wanaagsan ayna tani tahay mid amniga lagu xoojinayo, isagoo xusay in ciidamada amniga dowladda ay baaritaanno ku sameyn doonaan goob walba oo loo baahdo.
Hadalka wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya ayaa imaanaya xilli shalay uu Muqdisho ka dhacay qarax lagu dilay in ka badan 10-qof, kaasoo mas’uuliyadiisa ay sheegatay Xarakada Al-shabaab.
Dhanka kale, ammaanka magaalada Muqdisho ayaa waaydan ahaa mid faraha kasii baxaya oo aan wanaagsanayn, kaddib markii Toddobaadkan oo keliya ay ka dhaceen Muqdisho weerarro uu ka mid ahaa mid lagu qaaday madaxtooyada Soomaaliya.
Waxaa Al-shabaab ay ku dishay Muqdisho dhowr qof oo isugu jira mas’uuliyiin ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya, haween shaqaale ah, kuwo ganacsato iyo dad kale oo rayid ah, kuwaasoo muujinaya in ammaanku uu yahay khatar.
Wasiirka Arrimaha dibadda oo la kulmay Shaqaalaha Wasaaraddiisa.
Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somalia, C/raxmaan Ducaale Bayle oo ay wehlinayaan wasiir-u-dowlahaiisa, Burci Maxamed Xamza iyo wasiir ku-xigeenkiisa, Mahad Mohamed Salaad ayaa waxay markii ugu horreysay si wadajir ah ula kulmeen dhammaan shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya.Kulanka oo ka dhacay xarunta wasaaradda ayaa looga hadal soo-dhaweyn ah ka jeediyay xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda, Cabdullaahi Dool M axamed oo ku booriyay shaqaalaha wasaaradda inay kordhiyaan howlaha shaqo ee Qaranka ay u hayaan, si loo gaaro guulo la taaban karo oo la xiriirta siyaasadda dibadda.
Wasiirka ayaa hadal uu ka jeediyay shirka, wuxuu ku sheegay in shaqaalaha wasaaradda kuwa gudaha iyo dibadda looga baahan yahay inay si habsami leh oo shaqa hufnaan ah u gutaan waajibaadka shaqo ee loo igmaday, wuxuuna ballan-qaanday in qof waliba oo shaqaale u ah wasaaradda la eegi doono habka uu u hagaajiyo shaqada, wax-qabadkiisa iyo wax-soo-saarkiisa , taasna ay hormuud u noqon karto dalacsiin .
Dr. Bayle ayaa sheegay in wasaaraddiisu tahay muraayadda Qaranka, loona baahan yahay in muuqaal wanaagsan oo ka tarjumaya dalka ay u bandhigto caalamka, iyadoo la ilaalinayo kala sarreynta, lana hagaajinayo hab maamuuska Qaranka ee ku aaddan qaabilaadda wufuudad dalka soo booqata.
Wasiirka oo ka hadlayay arrimaha dadka barakaca ah ee deegaansaday qaybo ka mid ah wasaaradda ayaa wuxuu muujiyay in wasaaraddu ay ka caawin doonto dadkaasi sidii ay u heli lahaayeen deegaan ka madax-banaan dhismaha wasaaradda, isagoo ku dhiirri-geliyay shaqaalaha wasaaradda inay si mutadwacnimo oo iskaa-wax-u-qabso ah ay ku dhisaan qeybaha ka burbursan wasaaradda oo uu ku jiro machadka daraasaadka diblamaasiyadda iyo naadi ay yeeshaan diblamaasiyiinta Soomaaliyeed si loo helo dhismayaal qurux badan oo lagu tababaro diblamaasiyiinta cusub oo dalku yeelanayo.
Jabuuti oo Heshiis Horumarinta Ciidamada ah la gashay Shiinaha.
Wasiirka Gaashaandhiga dowladda Jabuuti Xasan Darar Hufane ayaa sheegay in xiriir milatari ay la yeelanayaan dowladda Shiinaha ka dib kulamo xiriir ah oo masuuliyiin ka tirsan labada dhinac ay ku yeesheen magaalada Jabuuti."In badan ayaan u mahad-celinaynaa dowladda Shiinaha waqtiyada adag ee ay nala soo qaateen ,waxey naga caawin doonaan kor- u qaadidda mashaariic horumarineed oo dalka laga hirgalinayo "ayuu yiri Hufane oo ka hadlayay xiriirka labada dowladood.
Wasiirka Gaashaandhiga Shiinaha Chang Wanquan ayaa booqasho qaadatay laba maalin ku yimid dalka Jabuuti ,waxaana ay kulamo gaar-gaar ah wada qaateen madaxda dowladda ugu sareysa oo uu ku jiro madaxweyne Ismaacil Cumar Geelle.
"Dowladdeena diyaar ayey u tahay inaan Jabuuti ka taageerno tayaynta dhinaca Milatariga iyo waliba Ammaanka "ayuu isna yiri Chang oo la hadlay warbaahinta ka dib booqashadiisa,isagoo xusay in labada dal uu ka dhaxeeyo xiriir qota dheer.
Heshiisyo ay labada dhinac si hor dhac ah u gaareen ayaa waxaa ku jirta in maraakiibta dowladda Shiinaha ay adeegsan karaan dekadaha dalka Jabuuti ,iyaga oo fududaynaya tababaro gaar ah oo ay siinayaan ciidamada milatariga Jabuuti.
Sidoo kale dowladda Shiinaha ayaa seddex dekadood ka dhisaysa dalka Jabuuti iyo wado dheer oo isku xiri doonta Jabuuti iyo waliba wadamada dariska la ah gaar ahaan Itoobiya si kor loogu qaado xiriirka ganacsi ee geeska Afrika.
Ugu danbayntii dowladda Shiinaha ayaa lagu wadaa in ay taageero ka gaysato horumarinta ciidamada jabuuti ee ku jira howl-galka Amisom ee Soomaaliya,iyadoo heshiisyada la gaaray lagu wado in la dhaqan-galiyo dhawaan.
Jeneral Muungaab waa shaqsi ceynkee ah? Taariikh nololeedka Gudoomiyaha iyo duqa Muqdisho (SAWIRO)
Habada haddii aan soo koobno taariikh nololeedka Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Benaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa ay u qorantahay sida tan:-
DAAWO: Muuqaalka madaxwayne Gaas oo dhaanto ciyaaraya (VIDEO)
Madaxwaynaha Puntland C-wali Maxamed Cali Gaas ayaa markii uu tagay dhulka dowlad degaanka soomaalida Ethopia waxa la dhelsiiyay Dhaanto,hadaba nala daawada Madaxwaynaha oo dhaantaynaya .
Ra’isul wasaraha Soomaaliya oo maanta safar ku tagaya magaalada Baydhabo iyo xildhibaano gaaray halkaasi
Ra’isul wasaaraha dowladda soomaaliya ayaa la sheegay inuu maanta tagayo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay halkaas oo hadda ay ksocdaan labo shir oo mid kasta la doonayo in maamul loogu dhiso qaar kamid ah gobolada koofur galbeed ee dalka soomaaliya, iyadoo midkoodkood ay wadaan ergooyin doonaya in maamul loo dhiso 6 gobol ,halka akn kale ay ergooyinka ka qeybgalayaa ay doonayaan in aty dhisaan maamul goboleed ka kooban 3 gobol oo gobladaasia ka mid ah
Si rasmi ah looma oga ujeedada ra,iisulwasaruhu utagayo halkaasi,waxayse warar ku dhow dhowi sheegayaan inuu doonayo inuu baydhabo kulamo kala duwan kula yeesho labada dhinac ee shirkaasi wada si uu ugala hadlo in laba shir aysan suurtagal aheyn ee loo bahan yahay in hal meel la isugu yimaado lamana oga inay dhinacyadaasi aqabalayaan in hal meel la isugu keeno shirkaasi amaba la joojiyo shirarka isbarbarsocda
Dowladda soomaaliya ayaa horey ugu dhawaaqday inaysan midna aqoonsan doonin labadaasi shir iyadoo sheegtay inay shirarkaasi gobolka ka abuuri karaan xasilooni darro dhinaca kale waxaa shalay gaaray magaalada baydhabo wafdi Xildhibaanno ah oo uu horkacayay Xildhibaan Mustaf Mukhtaar Guudow kuwaas oo sheegay inay ka qeyb galayaan shirka Maamul u sameynta Seddex Gobol ee Lagu dhisayo Maamul Goboleedka Soomaaliyeed ee Koofur Galbeed,waxayna isla shalay tageen goobta uu ka socdo shirkaasi oo ah Hoteel Bakiin oo ay ku sugan yihiin Ergooyinka kaqeyb galaya shirka Maamul u sameynta Gobollada Bay, Bakool iyo Shabeelaha Hoose.
Guddoomiye ku xigeenkii hore ee Barlamanka Kenya oo sheegay in Itoobiya ay dooneyso inay qabsato Somaliya, ujeed-kalena aysan la laheyn
Wararkii ugu dambeeyay Axmed Madoobe oo ku sii jeeda magaalada A/ababa iyo taliyihii hogaamin lahaa ciidanka AMISOM ee Itoobiya oo…
Hoggaamiyaha maamulka KMG ah ee Jubba, Axmed Maxamed Islaam ayaa shalay oo Arbaco aheyd kula kulmay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya wakiilka Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Danjire Mahamat Saleh Annadif, sida uu warbaahinta u sheegay wasiiru dowlaha madaxtooyada Jubba, labada mas’uul ayaa ka wada hadlay is-beddelka iyo dib-u habaynta lagu sameeyay howlgallada AMISOM iyo howlgallada milateri ee ka dhanka ah Al-Shabaab ee la filayo inay dhawaan bilowdaan.
Axmed Madoobe ayaa marka uu dhammaysto shirarka uu ku leeyahay Nairobi, wuxuu u ambabaxayaa magaalada Addis Ababa, halkaas oo uu kula kulmyo wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya, Tedros Adhanom, iyagoo ka wada hadli doona arrimo ay ka mid yihiin heshiiskii Addis Ababa ee u dhaxeeyay maamulka Jubba iyo dowladda federaalka oo waqtigiisii uu gabaabsi yahay ,sidoo kalena kala hadlaya howlgallada AMISOM.
Axmed Madoobe waxaa safarkiisa ku wehliya ku-xigeenkiisa labaad Cabdiqaadir Maxamed Luga-dheere, wasiiru dowlaha haweenka iyo qoyska, Marwo Qamar Deeq Xaaji Khaliif iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo ammaanka, Cabdirashiid Xasan Cabdinuur.
Wasiiru dowlaha madaxtooyada Jubba, Cabdiqani Cabdi Jaamac ayaa dhinaca kale sheegay inuu magaalada Kismaayo soo gaaray taliyihii hoggaamin lahaa ciidanka AMISOM ee Waaxda 6-aad (Kismaayo), kaas oo u dhashay dalka Sierra Leone.wuxuuna intaasi ku daray in ciidamada Sierra Leone ay yihiin ciidamo aad u tababaran oo anshaxooda uu wanaagsan yahay, wuxuu beeniyay wararka sheegaya inay ciidanka Kenya ka baxayaan magaalada Kismaayo, isagoo xusay inay ciidanka Kenya ka sii mid ahaan doonaan ciidanka waaxda 6-aad, isla markaana ay hoggaanka u sii hayn doonaan taliska waaxda 2-aad ee gobollada Gedo iyo Jubbooyinka.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland:- Dabogal ayaan ku sameyn doonaa dhaqaalaha beesha caalamka ay bixiso
Ku simaha maaxwaynaha ahna madaxwayne ku xigeenka Puntland Eng.Cabdixakiin Cabdilaahi Camey oo shalay ka qayb galay shir dib loogu eegayo waxbarashada Puntland ayaa sheegay inay dabo gal ku samayn doonaan dhaqaalaha beesha caalamka ay siiso Puntland, Dr. Camey ayaa sheegay inay ka go’an tahay sidii loo kordhin lahaa tayadda waxbarshada Puntland si loo gaaro waxbarashadda wanaagsan oo dadka deeqda.isagoo arrintaasi ka sii hadlayana waxa uu yiri”Waxan run ahaantii rabaa si gaar ah inaan wasaradda waxbarashada u faro in gacanta lagu qabto tayaynta waxbarashada Puntland,waxaan rabaa deeq bixiyaasha in waxyaabaha dowladdani ay ku talo galsantay inay sida ballaaran u qaado inay tahay tayaynta waxbarashada”.
Itoobiya oo Shaacisay inay dagaal adag la galayso Ururka Al-shabaab
Dowladda Itoobiya oo ciidamadeedu dhawaan ku biireen howgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa sheegtay in ay ka go’an tahay sidii ay uga shaqeyn lahayd nabad kusoo celinta Somalia kaddib sannado badan oo colaado ah.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya, Dina Mufti ayaa daboolka ka qaaday in dowladdiisa ay ka go’an tahay nabadeynta Somalia, isla markaana ay xoog iyo maal fara badan ku bixinayaan arrintaas.
“Itoobiya waxay Soomaiaya u dirtay ciidammo fara badan oo nabad ilaalin ah si ay qayb uga noqdaan howlgalka Midowga Afrika. Qorshaheennu waa in aan kula dagaalanno Al-shabaab meel walba oo ay Soomaaliya ka joogaan,” ayuu yiri Mufti.
Sidoo kale, afhayeenku wuxuu sheegay in nabadda Soomaaliya ay tahay mid dani ay ugu jirto nabadgalyada gobolka Bariga Afrika, isagoo Al-shabaab ku tilmaamay koox kasoo horjeedda deggenaashaha gobolka oo dhan.
Afayeenka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in Itoobiiya ay qayb weyn ka qaadanayso nabadaynta dalalka gobalka, sida Koonfurta Sudan, Masar iyo Jamhuuriyada Afrikada Dhexe.
Itoobiya ayaaa qayb ka ah dowladaha ciidamada AMISOM ugu taageeray Soomaaliya si ay dowladda Soomaaliya uga taageeraan dagaalka ay kooxda Al-shabaab kula jirto.
Hadalkan ayaa wuxuu kusoo beegmayaa xilli taliska AMISOM uu sheegay in ay qorsheynayaan howlgallo ay ka billaabaan guud ahaan gobollada Somalia kuwaasoo lagu doonayo in Al-shabaab looga saaro deegaannada ay gacanta ku hayso.
Wasiirka Warfaafinta oo Wariyeyaasha ugu baaqay inay Taxadaraan
Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya, Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow ayaa wariyeyaasha Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka taxadaraan amaankooda inta ay socdaan howgallada ka dhan ah Al-shabaab ee ay waddo dowladda Soomaaliya.
Dhuxuloow ayaa hadalkan ka sheegay Muqdisho kaddib markii uu booqasho ugu tagay wariye Axmed Siciid Axmed oo ka mid ah wariyeyaasha Muqdisho ka howlgala, kaasoo ku dhaawacmay weerarkii Jimcihii lagu qaaday xarunta madaxtooyada Soomaaliya.
Sidoo kale, wasiirka ayaa ugu baaqay suxufiyiinta inay marka hore hubiyaan goobta ay doonayaan inay warbixinnada ka qaataan, xitaa haddii ay tahay goob uu howlgal ka socdo.
“Waxaa horay loo ballanqaaday inaan ka gudubno isla-xisaabtan la’aanta iyo in kuwii dilalka u geystay suxufiyiinta lasoo xiri doono lana horgeyn doono cadaaladda,” ayuu yiri Dhuxuloow.
Axmed Siciid ayaa u shaqeynayay idaacadda Kulmiye oo ka mid ah kuwa FM-ka ah ee ka howlgala Muqdisho, isagoo si xun u gubtay, sidoo kalena wuxuu qabaa jab kasoo gaaray gacantiisa midig, sidoo kalena wuxuu ka qabaa feeraha dhaawac.
Ururka suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ee NUSOJ ayaa warbixin ay soo saareen ku cambaareeyay weerarrada macno la’aanta ah ee ay waxyeelladu kasoo gaarayso wariyeyaasha Soomaaliyeed.
Xarakada Al-shabaab ee Somalia ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkii madaxtooyada Soomaaliya, kuwaasoo ay u adeegsadeen gaadiid miineysan iyo rasaasta ka dhacda qorshaha daran-doorriga u dhaca, iyadoo mas’uuliyiin kala duwan lagu dilay weerarkaas.
FARMAAJO: “Madaxda Dowladdu Waa in ay Shacabka Kasbadaan”
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa wareysi uu bixiyay kaga hadlay amaanka Soomaaliya iyo qaabka ugu habboon ee wax looga qaban karo amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, kaddib weerarkii lagu qaaday madaxtooyada Soomaaliya.
Farmaajo ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya looga baahan yahay inay kalsoonida shacabka kasbato, taasoo uu ku sheegay inay tahay kaalinta ugu weyn ee u sahli kara inay nabadda dalka sugto.
Sidoo kale, wuxuu sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya loo baahan in kalsooni lagu siiyo in marka ay dagaalka la galayaan Al-shabaab inay yihiin askar u dhintay Qarankooda, balse aysan ahayn kuwo u dhintay qabiil iyo wax la mid ah, askarigii dhintana xuquuqdiisa meel la saaro wadaniyaduna ay tahay tan lagu howlgalayo.
“Deggenaasho la’aanta dalka iyo horay u socod la’aanta dowladda federaalka waxaa qayb ka ah ballanqaadyada madaxdu sameeyaan oo aan laga dhabeyn ama sidii loo qaaday aan loo fulin,” ayuu yiri Farmaajo oo xusay in uu ka codsanayo dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda inay ammaanka ka wada-shaqeeyaan, gaar ahaan midka caasimadda Soomaaliya.
Isagoo sii halaya ayuu wax laga xumaado ku tilmaamay in saddex sano kaddib ay Al-shabaaba ku dhiirato inay maalin cad weeraraan xaruntii ugu weynayd ee dalka looga talinayay ayna kordhiyaan weerarradooda Muqdisho.
Al-shabaab ayaa isaga baxday magaalada Muqdisho bishii Ogoosto ee 2011-kii, iyadoo markaas ay dowladda Somalia si rasmi ah ula wareegtay gacan ku haynta magaalada xarunta ah ee Muqdisho.
Ugu dambeyn, Farmaajo wuxuu mas’uuliyiinta dowladda uu ugu baaqay inay ogaadaan inay yihiin dad Qaran u shaqeynaya ee aysan ahayn kuwo qabiil iyo wax la mid ah u shaqeynaya, ayna xoojiyaan dagaalka ay Al-shabaab kula jiiraan.
Dowladda Soomaaliya iyo Qaramada Midoobay ayaa kala saxiixday heshiis lagu xoojinayo xiriirka u dhexeeya QM iyo dowladda Soomaaliya.
Saxiixa heshiiskan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamud, iyadoo heshiiskan uu u saxiixay dowladda Somalia wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, C/raxmaan Ducaale Bayle, halka QM uu u saxiixay dajire Nicholas Kay.
“Waxaan u mahad-celinayaa guddigii ka kala socday QM iyo dowladda oo in muddo ahba kasoo shaqeynayay heshiiska oo ah mid sii xoojinaya xiriirka Soomaaliya iyo QM. Dowladdu waa ka go’an tahay dhaqan-gelinta heshiiskan waana saldhigga wada-shqeynta iyo gar-gaarka shacabka Soomaaliyeed,” ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxweynaha oo sii hadlayay ayaa yiri: “Waxaan ugu baaqayaa hay’adaha caalamiga ah ee ka howlgala Somalia inay hubiyaan in heshiiyadooda aysan dhacsanayn, isla markaana cusbooneysiiyaan haddii uu ka dhacay. Dhamaan heshisiyadu waa kuwo muhiim u ah wada shaqeynta iyo illaalinta danaha shacabka Soomaaliyeed.”
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, Bayle ayaa isaguna sheegay in gar-yaqaannada labada dhinac ay si taxadar leh uga soo shaqeeyeen heshiiskan oo ah mid labada dhinacba ay ku wada qanacsan yihiin, isla markaana qeexaya waajibaadka iyo xuquuqaha labada dhinac.
Ergayga Qaramada Midoobay ee arrimaha Soomaaliya, Nicholas Kay oo isna ka hadlay heshiiska ayaa ku tilmaamay mid dan u ah dalka Soomaaliya iyo Qaramada Midobay, wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay in maanta la saxiixo heshiiskan.
Xog:- Gudoomiyaha Cudub ee gobalka Banaadir oo saacadaha soo socda lagu dhawaaqi doono
Dowladda Federalka ee Soomaaliya, ayaa damacsan in ay isbedel ku sameyso Hogaanka Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan).
Gudoomiyaha Maxkamada Sare ee Ciidamada Qalabka Sida General Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab), ayaa loo wadaa in loo magacaabo booska uu baneynaayo Maxamuud Axmed Nuur.
Warar lagu kalsoonaan karo oo ay heshay Shabakada Xulkanews, ayaa waxay sheegayaan in Madaxweynaha Soomaaliya uu qalinka ku duugay, in General Muungaab uu u magacaabo Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho.
General Muungaab, ayaa waxaa lagu wadaa in lagu soo magacaabo Wareegto la filaayo, in saacadaha soo socda laga soo saaro Xafiiska Madaxweynaha Dowladda Federalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Magaalada Muqdisho, ayaa si weyn looga hadalhayaa isbedelka lagu wado in lagu sameeyo Tarsan, iyadoo ay dadku qaarkood ku sheegayaan in Tarsan uu horumar ballaaran ka sameeyay Magaalada Muqdisho, tan iyo 2010-kii oo uu xilka soo haayay.
Korneyl Cabaas Ibraahim Gurey oo beeniyay in Dowladdu ay mushaaraad siiso Ciidamada Dowladda ee Jubbooyinka iyo Gedo.
Korneyl Cabaas Ibraahim Gurey, Abaan Duulaha Ciidanka Xoogga Dalka ee Gobolada Jubbooyinka iyo Gedo, ayaa wuxuu beeniyay in Dowladdu ay mushaaraad siido Ciidanka Dowladda, ee ka hawlgala Gobolada Jubbooyinka iyo Gedo.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa wuxuu Isniintii sheegay in Dowladdu ay bil kasta bixiso mushaaraadka Ciidanka Dowladda, meel kasta oo ay dalka kaga sugan yihiin, sida uu yiri.
Hase ahaatee Korneyl Cabaas Ibraahim Gurey, ayaa si xoogan u beeniyay hadalka ka soo yeeray Madaxweynaha Dowladda Federalka ee Somaliya, wuxuuna ku sheegay mid aanu waxba ka jirin.
Abaan Duulaha, ayaa xusay in muddooyinkii ugu dambeysay aynaan helin wax lacago ah, oo kaga yimid dhinaca Dowladda Federalka ee Somaliya, iskaba daayaa mushaaraad ay si joogto ah kaga helaan Dowladda.
Wuxuu walaac ka muujiyay hadalka aan laga fiirsan ee ka soo yeeray sida uu sheegay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, isla-markaana uu ka xun yahay in Madaxweynuhu uu ka been sheego, waxaynaan helin Ciidanka Dowladda.
Dadka u dhuun-duleela Siyaasada dalka, ayaa inta badan Masuuliyiinta Dowladda ku eedeeya, in ay ka gaabiyeen bixinta mushaaraadkii ay xaqa u lahaayeen Ciidamada Dowladda.
Ra’iisul Wasaarihii hore oo beeniyay inuu leeyahay Bar Facebook, kadib been abuur…
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa markii ugu horeysay waxaa uu iska fogeeyey lahaanshaha barta Facebook ee ku furan magaciisa ” Abdi Farax Shirdoon (Saacid)” kuna tilmaamay been abuur magaciisa lagu sameynayo.
Abdi Farax Shirdoon ( ayaa waxaa uu sheegay inuusan laheyn facebook-ga magaciisa wata oo dhawaan laga soo xigtay sawir lagu durayey Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud kaasi oo ahaa mid laga soo qaaday maalin la aasayey dadkii ku geeriyooday weerarkii madaxtooyada balse uu madaxweynaha Xaflada Sanad guurada Ciidamadda Asluubta uu uga qeybgalay taaso ka dhacday magaalada Muqdisho. Iyaddoo uu sawirkaasi macno siyaasadeed badan laga fasiray markii lagu arkay barta facebook ee uu iminka beeninayo inuu iska leeyahay Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid)” Aniga ma lihi wax Facebook ah waxaana jira dad magaceyga ilaa maalintii aan xilka Ra’iisul wasaare qabtay ilaa hadda oo anan xil dowladeyn heyn sameystay oo sida ay rabaan u isticmaalaya. Haddaba waxaan rabaa in aan shacabka oo dhan uga digo arrintaasi si aysan ugu qaldamin, oo aysan ugu qaadan in aan aniga ahay qofkaasi” ayuu ku yiri Warsaxaafadeed kasoo baxay Ra’iisul Wasaare Shirdoon.
Waxaa uu intaasi ku daray in ay soo gaareen maalin kasta fariiso sheegaya in bar magaciisa ku furan la soo dhigo sawiro iyo warbixino la huwinayo inuu isaga soo gudbinayo, taasi buu yiri ay dad badan u qaateen inuu isaga yahay. Gaar ahaan waxaa uu iska fogeeyey sawirkii dhawaan lagu baahiyey facebook ee Madaxweyne Xasan ku saabsanaa kaddibna ay warbaahinta soo xigteen kaasi oo fariimo badan ka helay.
” Sawirada la soo dhigay iyo warbixinada magaceyga lagu soo gudbiyo ee facebook waxaan sheegayaa in aanan aniga shaqo ku laheyn, waxaana ugu danbeeyey oo aan cadeynayaa sawirka la sheegayo in madaxweynaha laga soo gudbiyey isaga oo kulan ka qeybgalaya in aanan waxba kala socon” ayuu yiri Saacid oo ugu baaqay dadka magaciisa isticmaalaya inay arrintaasi ka waantoobaan.
” Walaalaha magaceyga sida qaladka ah u isticmaalaya waxaan ka codsanayaa inay i xushmeeyaan oo aysan been iga faafin,ummada kale iyo madaxdana ujeedooyin guracan oo ay ka leeyihiin u isticmaalin magaceyga.”
Dhinaca kale warbaahinta Soomaalida ayuu ka codsaday inaysan iska soo xigan baraha aysan xaqiijin karin cidda isticmaaleysa oo aysan qof aanba waxba ka ogeyn u saarin xumaan iyo ammaan meeshaasi lagu soo gudbiyo. Wixii isaga ay gaar wax uga weydiinayaana ay la soo xiriiri karaan.
” Waxkasta inay iska hubiyaan inta aysan baahin ayaa looga baahan yahay warbaahinta, maxaa yeelay cid xaqiijin karta ma leh magaca iyo sawir qof leeyahay oo ciddi isaga sameysato facebook kadibna wixii ay doonto ku faafiso. Sidaasi darteed waa in wixii aniga igu saabsan oo ay meelahaasi oo kale ku arkaan ila soo xiriiraan oo ay wax iga weydiiyaan inta aysan bulshada beentaasi gaarsiin.” ayuu yiri Saacid oo hadlayay.
Ugu danbeyntii Abdi Farax Shirdoon (Saacid) ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qeybqaataan nabada iyo dib u dhiska dalkooda, islamarkaana u rajeeye y inay guul iyo midnimo ku gaaraan sanadka danbe.
Jen. Dhego-badan oo si Adag uga Hadlay Amni-xumada Muqdisho
Abaanduulihii hore ee ciidanka xoogga dalka, Jen. C/kariin Yuusuf Aadan (Dhego-badan) ayaa si adag uga hadlay nabadgalyo xumada xilligan ka jirta magaalada Muqdisho, kaddib weerarkii ay Jimcihii lasoo dhaafay ku qaadday Al-shabaab xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho.
Jen. Dhego-badan oo ku sugan magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa sheegay in in isaga u qabo in amaan xumada jirta ay sababteeda leeyihiin siyaasiyiinta, ganacsatada iyo qurba joogta Soomaaliyeed, wuxuuna ku tillmaamay in wax walba oo ay awoodaan ay u sameeynayaan sidii uu u hir-geli lahaa hamigooda siyaasadeed.
“Anigu waxaan qabaa in dhibaatada taagan xilliga ee ay amni-darradu ugu horreyso ay mas’uul ka yihiin siyaasiyiin, ganacsato iyo qurbo-joog dano gaar ah leh,” ayuu yiri Jen. Dhego-badan oo la hadlayay idaacadaha ka howlgala Muqdisho qaarkood.
Sidoo kale, Jeneraalka ayaa sheegay in wax lala yaabo ay tahay in maalin cad la weeraro madaxtooyada Soomaaliya oo ku taalla bartamaha Muqdisho, wuxuuna intaas ku daray in Soomaalida oo dhan looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan ammaanka dalkooda, gaar ahaan Muqdisho.
“Waxaan ku talinayaa dadka aan eedeynta u jeediyay iyo shacabkaba inay ka shaqeeyaan horumarka dalkooda, waayo waa dalkoodii cid ammaankiisa uga shaqeynaysana ma jirto haddii aysan iyagu ka shaqeysan, ayuu jananku hadalkiisa ku daray.
Hadalka Jen. Dhego-badan ayaa wuxuu ka mid noqonayaa eedeymo iyo cambaareyno kala duwan oo la jeedinayay tan iyo markii Al-shabaab ay u suuro-gashay inay weerar ku qaaddo madaxtooyada Soomaaliya.
War Culus: RW C/wali oo ku dhawaaqay Arin Lama Filaana & Qudbad(Maqal)
Raysal Wasaaraha Xukuumada Soomaliya C/wali Sheekh Axmed Ayaa Wuxuu Jeediyey Qudbad Dheerayd Taasi oo Uga hadlay Weerarkii Dhowaan Ka Dhacay Xarunta madaxtooyada VILLA Somalia iyo Arimo Badan oo Quseeya Guud Ahaanba Dalka.
HALKAN KA DHAGAYSOMar kale, waxaan tacsi u dirayaa ummadda Soomaaliyeed iyo eheladii ay ka geeriyoodeen marxuumintii ku dhintay falkii argagixisanimo oo ka dhacay Villa Soomaaliya maalintii Jimcaha ee 21-kii bishan,waxaan Eebbahay ugu baryayaa in uu jannadii geeyo marxuumiinta, samir iyo imaanna ka siiyo ehelkoodii. Ina lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun.
Dawlada Slovakia oo u ogolaatay qaxooti Somaliyeed inay magan gelyo siiyaan
Ma’uuliyiin ka tirsan Al-Shabaab oo beenisay inay amartay xiritaanka ganacsiga qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho.
Xarakada Al-Shabaab ayaa beenisay inay ku daadisay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho waraaqo loogu digayay ganacsatada Muqdisho.islamarkaasna ay arrintaasi tahay been abuur ay sameeyeen qaarka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya oo doonayey inay dhibaateeyaan ganacsatada Soomaaliyeed.
Madaxa Al-Shabaab ee Muqdisho Sheekh Cali Maxamed Xuseen (Cali Jabal) ayaa xalay sheegay inaysan Aal-shabaab ka suurtagalayn inay dhibto dadka ganacsatada ah ee ku nool caasimadda, Mujaahiddiinta way ka hufan yihiin inay dhibaan ama dhacaan xoolaha dadka Muslimiinta. Waxay u taagan yihiin inay difaacaan Muslimiinta iyo xoolahooda,” ayuu yiri Sheekh Cali Jabal.
Wuxuu ku eedeeyay ciidanka sirdoonka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM” inay ka dambeeyaan arrintaas, iyagoo doonaya inay dhibaateeyaan dadka Muslimiinta ah, qaar ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa la sheegay in lagu daadiyay waraaqo ganacsatada looga digayay inay furaan goobahooda ganacsiga.
Maamulka AAhlu Sunna Waljamaaca oo ka soo horjeestay manhajka waxbarashada ee Xukuumadda Soomaaliya..
Maamulka Ahlu Sunna Waljamaaca ee gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa sheegay in uu qaldan yahay Manhajka waxbarashada ee dhawaan ay qeybisay dowlada Soomaaliya waxaana ay diideen in Manhajkaas laga hirgaliyo deegaanada ay maamulaan Ahlu Sunna Waljamaaca.
Iyagoo shalay meel fagaare ah ku gubay nuqullo ka mid ah buuggaata loogu talo galay in dugsiyada waxbarashada lagu dhigo.
Xoghayaha waxbarshada Ahlu Sunna ayaa u sheegay warbaahinta in dhamaan qeybaha manhajkaasi ay ku jiraan waxybo khatar ku ah caqiidada iyo diinta islaamka sida uuyiri isagoo xusay in loogu talo galay in acrruuta soomaaliyeed maskada loogu shubo waxyaabo qaldan oo sida uu yiri ay kooxo gaar ahi ku soodareen manhajkaasi.
Waxa uu sheegay xoghayuhu in dhulka ay ka taliso ahlu sunna aan lagu faafinkarin manhajkaasi oo sheegay inuu yahay mid khaldan, wuxuuna intaasi ku daray in dowladda Somaliya oo ay arrintaasi wax ka weydiiyeen aysan wax jawaab ah soosiinin ila hadda sida uu yiri.